IApple Arcade yongeza imidlalo embalwa | Ndisuka mac
I-Apple Arcade yongeza imidlalo embalwa
Ukusuka kwaApple bazimisele ukuphucula okanye ukuzama ukuphucula ikhathalogu yemidlalo ekhoyo kule nkonzo "impumelelo encinci kangaka" ekhoyo kwilizwe lethu ukuzama ukuyivelisa kwakhona. Uluvo lwe-Apple ngale nkonzo kukubonelela ngemidlalo eyahlukeneyo, ngaphandle kokuthatha indawo kwi-iPhone kunye nexabiso lenyanga njengombhaliso kodwa ikhathalogu enqabileyo yemidlalo yongezwa kwinto yokuba izihloko azikho okugqwesileyo kwicandelo, bayayishiya le Apple Arcade ukwahlukana.
I-Apple Arcade isungula ulwandiso lwayo olukhulu kunye nemidlalo engaphezulu kwe-180
Kule meko, inkampani ifuna ukukhuthaza ukusetyenziswa kwale nkonzo yomdlalo kwaye yongeza Olona lwando lukhulu lwakha lwabonwa kwiApple Arcade kunye nemidlalo engaphezu kwe-180. Phakathi kwale midlalo mitsha ivela kwii-franchise ezingaphezulu kwama-30, iimveliso kunye nabayili bemidlalo, sifumana izihloko ezinje ngezi: I-Threes, i-Fruit Ninja, Sika intambo, i-NBA 2K21 Arcade Edition, i-Star Trek: i-Legends okanye i-Oregon Trail phakathi kwabanye abaninzi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona ngxaki iphambili kule nkonzo lixabiso kunye nemidlalo eyongezwe kwikhathalogu. Asifuni ukuthi le midlalo ingaphambili ibimibi okanye incinci kakhulu, kodwa kukuba abasebenzisi abathanda ukudlala bafuna iintlobo ezahlukeneyo ngokufika kwe eli nani lezihloko ezitsha kwaye ezinye zazo zinomdla kakhulu ngaphezulu kunokuba kunokwenzeka ukuba inani lababhalisi benkonzo lenyukee.
Ngokwenyani abasebenzisi abaninzi baneApple Arcade ngokudibeneyo kunye nokubhaliselwa kwenkonzo yeApple One, kodwa bambalwa abaphela bedlala le midlalo. Ngoku ngale Push intsha Abanye baba basebenzisi "banokuchitha ixesha" bedlala kwi-Mac, i-iPhone okanye i-iPad.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Imidlalo » I-Apple Arcade yongeza imidlalo embalwa